Wararka - Saadaasha qeybsiga suuqa baakadaha cuntada cusub ee caalamiga ah laga bilaabo 2021-2028: Suuqa kala qeybinta dabacsan ayaa xisaabin doona 47.6% suuqa 2020
Saadaasha qeybsiga suuqa baakadaha cuntada cusub ee adduunka laga bilaabo 2021-2028: Suuqa kala qeybinta dabacsan ayaa xisaabin doona 47.6% suuqa 2020
Dublin-(WIILKA GANACSIGA)-"Cabbirka suuqa baakadaha cuntada cusub, nooc ahaan (ad adag, dabacsan), maaddo (balaastik, warqad iyo kartoon, bagasse, polylactic acid), dalab (alaab caano ah)" "Wadaag iyo Falanqayn Taxane ah Warbixinta "), saadaasha gobolka iyo qeybta suuqa, 2021-2028" warbixinta ayaa lagu daray alaabada ResearchAndMarkets.com.
Marka la gaaro 2028, suuqa baakadaha cuntada cusub ee adduunka ayaa la filayaa inuu gaaro 181.7 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Suuqa ayaa la filayaa inuu ku fido heer kobcin sanadle ah oo ah 5.0% laga bilaabo 2021 ilaa 2028. Kordhinta baahida loo qabo waxsoosaarka caanaha cusub ee dalalka soo koraya ayaa la filayaa inay noqoto awoodda wadata suuqa inta lagu jiro xilliga saadaasha muhiimka ah.
Sababtoo ah carqaladeynta silsiladda sahayda, warshaduhu waxay la kulmeen saameyn weyn oo ka timid masiibada COVID-19. Joojinta wax -soo -saarka Shiinaha, oo ka mid ah soosaarayaasha alaabada ceyriinka ah, ayaa saameysay soosaarayaasha baakadaha adduunka oo dhan. Yaraanta alaabta ceyriinka ah sida balaastikada, aluminiumka iyo birta ee soo saarayaasha Shiinaha ayaa horseeday kala -duwanaanshaha sahayda iyo baahida, laakiin soo -saareyaasha ayaa la filayaa inay si tartiib tartiib ah u kordhiyaan wax -soo -saarka.
Maaddaama silsiladda sahaydu aysan saamayn oo soo-dejintu sii socoto inta lagu jiro faafitaanka COVID-19, dalabka baakadaha ee khudaarta iyo miraha cusub weli isma beddelin. Gaar ahaan, iibinta miraha iyo khudaarta leh fitamiin C aad u badan ayaa si aad ah u kordhay, taas oo sii kordhisay farqiga u dhexeeya sahayda iyo baahida suuqa.
Baahida sii kordheysa ee xallinta baakadaha saaxiibtinimada leh ayaa ku qasabtay shirkadaha inay soo saaraan badeecooyin dib loo warshadeyn karo ama waxyeeli kara. Tusaale ahaan, bishii Nofembar 2020, Amcor plc waxay soo saartay khad wax -soo -saar cusub Packpyrus, xalka baakadka ee hilibka iyo farmaajada. Sidoo kale, bishii Sebtember 2019, PPC Flexible Packaging Co., Ltd. waxay soo saartay alaabada cagaaran ee PPC, oo ay ku jiraan bacaha la bacrin karo iyo kuwa dib loo warshadeyn karo, si loo xoojiyo faylalka waxsoosaarka waara ee deegaanka u fiican
Ciyaartoyda waaweyn ee suuqa ayaa sii wada inay soo iibsadaan ciyaartooy yar oo suuqa ah si ay u kordhiyaan saamigooda suuqa ee suuqa adduunka. Tusaale ahaan, bishii Febraayo 2019, Sealed Air waxay ku dhawaaqday iibsiga meheradda baakadaha dabacsan ee MGM si ay u kordhiso saamigeeda suuqa oo ay u ballaariso xirmooyinka alaabta baakadaha cuntada. Sidoo kale, bishii Juun 2019, Amcor Plc waxay heshay Bemis Company Inc., oo ah soo -saare baakad dabacsan oo adag oo fadhigiisu yahay Mareykanka, si loo ballaariyo saamaynteeda adduunka.
ResearchAndMarkets.com waa isha ugu horreysa ee warbixinnada cilmi -baarista suuqa caalamiga ah iyo xogta suuqa. Waxaan ku siinaynaa xogtii ugu dambeysay ee suuqyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka, warshadaha muhiimka ah, shirkadaha ugu sarreeya, badeecadaha cusub iyo isbeddellada ugu dambeeyay.